iwe & apos; usapenga, inongori google mepu yenguva yenguva bug
Kuru Nhau & Ongororo Iwe & apos; hausi kuzopenga, izvo & zvinongova zviri zveGoogle Mepu Timeline bug
Iwe & apos; hausi kuzopenga, izvo & zvinongova zviri zveGoogle Mepu Timeline bug
Google Maps Timeline inokutendera kuti uone nzvimbo dzawakashanyira uye nzira dzawakatora kuti usvike ipapo. Chakavanzika uye iwe chete ndiwe unokwanisa kuchiona. Nekudaro, pane dambudziko neiyo Timeline zvinoenderana zvakatumirwa zvakati wandei paGoogle & apos; peji rekutsigira Mamepu (kuburikidza Android Mapurisa ) kubva kuvashandisi. Nechimwe chikonzero chisingazivikanwe, imwe yedata renzvimbo haisi & apos; iratidzike paTimeline yekusiya maburi pane iyo graph. Vamwe vanotaura kuti data rese pamutsara wenguva yekumashure kutanga kwaMay 2020 rakanyangarika vamwe vachiona mwedzi kusvika kumakore edata achishayikwa.
Chaizvoizvo, iyo data inogona kunge isipo kubva kuTimeline, asi ichiri kubatana neakaundi yako yeGoogle. Google yasimbisa izvi kuApple Police; dambudziko nderekuti nekuda kwechimwe chikonzero, hazvioneke kuti iwe uone pane yako Nguva. Mumwe mutauriri weGoogle akati, 'Isu taona bug pane vamwe vashandisi vasingakwanise kuona yavo yeDunhu Nhoroondo dhata muTimeline Hapana dhata renhoroondo yeNzvimbo yakanga yarasika uye Nhoroondo yeNzvimbo yaive uye ichiri kutorerwa vashandisi vane chinhu ichi. Tiri mubishi rekudzoreredza kuoneka kwedata reNzvimbo yeNzvimbo muTimeline yevashandisi vese, izvo zvatinotarisira kuzadziswa mumazuva mashoma anotevera. '
Kunyangwe kana yako Nguva yakatarwa ichiratidza kushayikwa kwenguva, iyo data ichiri kubatana neakaundi yako yeGoogle
Mumwe mushandisi weGoogle Mepu akataura kuti akabaya rimwe remazuva ari muTimeline yaive isipo dhata uye ichiri kuratidza mepu yeblue nzira inoratidza kwaaive zuva iro uye kuti akasvikako sei. Google yakataura muchirevo chiri pamusoro kuti iri kuburitsa gadziriso iyo inotarisira kunge yakaparadzirwa kune wese munhu pazuva rinotevera kana maviri. Kana iwe ukashandisa yako Google Mepu Timeline kuteedzera iwo madaro awakafamba iwe & apos; iwe ungamhanyisa bhizimusi rinobhadharisa paira mamaira), chengeta maziso ako akasvuurwa kuti uwane iyo dudziro.
samsung piritsi vs ipad pro
renyeredzi tarisa 3 41mm vs 45mm
Iyo 32GB Samsung Galaxy S6 & S6 kumucheto ine 23GB yemahara nzvimbo, saka funga kuenda 64GB
Apple Watch Series 6: 40mm vs 44mm, ndeapi Apple Watch Series 6 saizi ndiyo yakanakira iwe?
Apple inoburitsa 'yakakosha' yekuchengetedza yekuvandudza iOS 12.5.4 yevakuru iPhones, iPads, uye iPod touch
Iwe wakasuruvara hapana ma earbuds muUS Note 20 bhokisi, saka Samsung inokupa iwe seti
Iyo inodzivirira mvura Galaxy S7 uye S7 kumucheto inoratidzira hunyoro sensor mune USB chiteshi
Samsung Galaxy S6 uye Galaxy S6 kumucheto: 36 matipi & manomano
Iyo Pixel 5 inokosha kutenga muna 2021?
LG G Stylo Ongororo
Iwe hauchakwanise kutakura foni yako kana piritsi muUS yakatariswa mukwende